Iyi webhusaiti inoshandiswa ne Joopzy LLC. Munzvimbo yese saiti, mazwi ekuti "isu", "isu" uye "edu" anoreva Inot.com. Inot.com inopa iyi webhusaiti, inosanganisira ruzivo rwese, zvishandiso, uye masevhisi aripo kubva kune ino saiti kwauri, mushandisi, yakatarwa pamusoro pekugamuchira kwako zvese zvirevo, mamiriro, zvirongwa, uye ziviso zvinotaurwa pano.
Cherechedza: Sezvo edu ese mairairo ari kutumirwa kubva kuChina isu hatitore mutoro kune chero mhando yechirwere.
Misoro inoshandiswa muchibvumirano ichi inosanganisirwa kuti ive nyore chete uye haizogumise kana kukanganisa zvimwe mazwi aya.
CHIKAMU 3 - KUKWANISA, KUKWANISA, NENGUVA YOKUDZIDZA
Zvimwe zvigadzirwa kana masevhisi anogona kuwanikwa ega online kuburikidza newebhusaiti. Izvi zvigadzirwa kana masevhisi anogona kunge ane mashoma huwandu uye anotarisirwa kudzoka kana kuchinjana chete zvichienderana nezvedu Return Policy.
Isu tine kodzero yekuramba chero kuraira kwamunoisa nesu. Isu tinogona, mukufunga kwedu pachedu, kuganza kana kuchemedza huwandu hwakatengwa pamunhu, paimba imwe neimwe kana pachirevo. Izvi zvinotadzisa zvinogona kusanganisira rairo dzinoiswa kana pasi peiyo imwe yevatengi account, kiredhiti kiredhiti kadhi, uye / kana mirau inoshandisa iyo imwechete kubhadharisa uye / kana kutumira kero. Muchiitiko icho isu chinoita shanduko kuenda kana kudzima kodhi, tinogona kuedza kukuzivisai nekubata iyo email uye / kana kubhadharisa kero / nhamba yefoni yakapihwa panguva iyo sarudzo yakaitwa. Isu tinochengeta kodzero yekuganhurisa kana kurambidza mirairo iyo, mukutonga kwedu kwega, inoita kunge yakaiswa nevatengesi, vatengesi kana nevanozvigovera.
Zvimwe zvirimo, zvigadzirwa, uye masevhisi aripo kuburikidza neSevhisi yedu anogona kusanganisira zvigadzirwa kubva kune wechitatu-mapato.
CHIKAMU 9 - KUSHANDISA KWAMUSHANDI, KUDZIDZA, UYE ZVIMWE ZVINOTUMIRA
CHIKAMU 11 - ZVIKANGANISO, KUSVITSA, NEMAZWI
Hapana imwe mhosva ichaja joopzy.com, vatungamiriri vedu, vatariri, vashandi, vanobatanidzwa, vamiririri, makondirakiti, vabati vezvinhu, vashanduri, vashandisi vebasa, kana marezinesi vane mhosva yekukuvara, kurasikirwa, kudiwa, kana chero zvakananga, zvisina kunanga, zvezviitiko, zvirango, zvakakosha , kana zvakakanganisika kukuvadzwa kwerudzi chero rupi zvarwo, kusanganisira, pasina muganho wakarasikirwa purofiti, mari yakarasika, mari yakarasika, kurasikirwa kwedatha, mari yekutsiva, kana chero kukuvara kwakafanana, kungave kwakavakirwa muchibvumirano, kurwiswa (kusanganisira kushaya hanya), mhosva yakasimba kana neimwewo nzira, kubva pakushandisa kwese kwese sevhisi kana chero zvigadzirwa zvakawanikwa uchishandisa sevhisi, kana chero chero zvataurwa zvichipindirana neimwe nzira yekushandisa kwako kwesevhisi kana chero chigadzirwa, zvinosanganisira, asi zvisingagumiri, pane chero zvikanganiso kana kusara mune chero chipi chinhu. kana kurasikirwa kwese kana kukuvara kwemhando ipi neipi yakaitika nekuda kwekushandiswa kwesevhisi kana chero chinhu (kana chigadzirwa) chakatumirwa, kutumwa, kana kumwe kuitirwa kubudikidza neshumiro, kunyangwe kana vakayamwa nezve zvavanogona. Nekuti dzimwe nyika kana masimba akatendera kusabvisirwa kana kuremerwa kwechisimba nekuda kwezvakakonzeresa kana zviitiko zvinokuvadza, mune dzakadaro nyika kana kutonga, mhosva yedu ichave yakaganhurirwa kusvika pakakwirira inotenderwa nemutemo.
Unobvuma kuregerera, kudzivirira uye kubata zvisina njodzi joopzy.com uye mubereki wedu, vanobatsirana, vanobatana navo, vanobatirana navo, maofficial, vatungamiriri, vamiririri, makontrakita, vanopa marezinesi, vanopa masevhisi, vashandirwi, vatengesi, vashandi nevashandi, vasingakuvadzi kubva kune chero chirevo kana kudiwa, kusanganisa inonzwisisika yemagweta 'fizi, inoitwa nechero wechitatu bato nekuda kwe kana kukonzerwa nekutyora kwako aya maSevhisi ebasa kana magwaro avanobatanidza nereferenzi kana kutyora kwako chero mutemo kana kodzero dzechitatu-bato.
Iyi Mitemo Yekushandira uye chero mitemo kana mitemo inoshanda yakatumirwa nesu pane ino saiti kana zvine chekuita neChipo inoita chibvumirano chose uye nzwisiso pakati pako newe uye tinotungamira kushandisa kwako kweSevhisi, tichitendera zvibvumirano chero zvipi nezvipi zvisati zvaitika kana zvekufungidzira, kutaurirana uye mazano. , ingave yemumuromo kana yakanyorwa, pakati pako newe (zvinosanganisira, asi isina kuganhurirwa, chero shanduro dzepamberi yeMitemo yeBasa).
Iyi Mitemo Yebasa uye chero zvibvumirano zvakapatsanuka zvatinokupa iwe maSevhisi zvichazotongwa uye zvichinzi zvinoenderana nemitemo yeUSA.
CHIKAMU 19 - ZVINOGONESESA KUMASHURE EBASA
CHIKAMU 20 - Ruzivo rwekubata